Ny fanontaniana fanontaniana napetrak'ireo mpampiasa motera # 1 momba ny orinasanao | Martech Zone
Ny mpampiasa fanontaniana milina fanontaniana # 1 manontany momba ny orinasanao
Talata, Janoary 6, 2015 Talata, Janoary 6, 2015 Douglas Karr
Tamin'ny 2014, amin'ny fikarohana rehetra ao amin'ny Google, Ahoana no no fehezan-teny # 1 nampiasain'ny mpampiasa motera fikarohana. Ny vokatra na serivisy rehetra amidy amin'ny Internet dia mamaly a Ahoana. Ny fanontaniana dia hoe ianao ve no toerana misy ny fampahalalana tadiaviny na tsia.
Raha misotro fanatanjahan-tena ianao, ny fomba mety hiatrehana kiritika, na ny fomba fanomanana ny vatanao ho an'ny fampihetseham-batana mafy. Raha toa ianao ka Analytics orinasa, ny fomba mety ho fomba famakafakana marina ny angona mba hanomezana valiny momba ny fampiasam-bola ho an'ny fampielezan-kevitra. Raha toa ianao ka mpamorona sary, ahoana ny fomba hisafidianana mpamatsy na fomba fampiroboroboana amin'ny fomba mahomby infographic.
Ny orinasa sasany dia tsy miresaka momba izany Ahoana no satria manahy ny fametrahana ny tsiambaratelony momba ny varotra an-tserasera izy ireo. Sabatra roa lela izay inoako manokana fa mandratra ny tenanao fotsiny ianao. Raha tsy manambara ny fomba ianao, dia manana tombony ireo mpifaninana aminao. Afaka manombatombana feno Ahoana no mamaha ny olana izy ireo dia manome azy ireo tombony amin'ny fifaninanana.
Ary amin'izao vanim-potoana izao, raha tsy mino ianao fa tsy mahita ny olona mikaroka ny fividianany manaraka Ahoana no ataonao io dia mikorontana. Aleoko kokoa manoratra momba ny fanitsiana ny olantsika sy ny famahana olana ho an'ny mpanjifanay toy izay ny fametrahana ny mpifaninana am-pahamendrehana ny fanolorana ataonay. Izany indrindra no hitantsika nitranga tao amin'ny indostrianay.
Noho izany, rehefa manomana ny atiny 2015 ho an'ny orinasanao ianao dia misy taonina maro ahoana ny fanontaniana mety mamaly amin'ny Internet ianao.
Ahoana mifidy mpivarotra (ary maninona ianao no tsara kokoa).
Ahoana hanamarinana ny fandaniana (ary angamba ny fomba takatry anao kokoa).
Ahoana hanombanana ny vahaolana (sy ny fomba fampifanarahan'ny vahaolana).
Ahoana hamaha ny olana (tsy misy sy miaraka amin'ny vahaolana arosonao mba hahalalana ny fahasamihafana ataonao).
Ahoana miova ny indostria (ary mijanona eo ambony ianao).
Ahoana lafin-javatra ivelany (toekarena, talenta, teknolojia) misy fiantraikany amin'ny vahaolana.
Ahoana mahay mamaly ianao (fanamarinana, fitsipika, fotodrafitrasa).
Ahoana loharano maro ilainy (sy ny fomba hampihenanao izany).
Ahoana be ny vidiny (ary ny fomba vidinao amin'ny fomba mahomby).
Ny zavatra lehibe indrindra amin'ny famaliana ahoana ny fanontaniana dia ny ahafahanao mametraka tsara ny orinasanao, ny vokatrao na ny serivisinao hanampy amin'ny vahaolana. Azo antoka, raha mamaly ianao Ahoana no hametraka gorodona mafy, mety misy manapa-kevitra ny hanao azy samirery. Fa mahomby Ahoana no ny lahatsoratra dia hiditra amin'ny antsipiriany be mba hanomezana ny antony tsara kokoa ny mahazo matihanina.
Ny DIY dia tsy hampiasa ny serivisinao na oviana na oviana, ianao dia manaraka ilay olona izay mandinika ny fahasarotany.
Tags: valinyAhoana noahoana ny valinyohatra ahoanaahoana ny fanontanianaahoana nofanontaniana fikarohana
Mety ho gaga ianao fa ho faranana ny referansy B2B
Maninona no mila rafitra fampitandremana mialoha ny varotra B2B anao
13 Jan 2015 amin'ny 10:07 PM
Misaotra, Douglas, tamin'ny fizarana an'ity lisitra mampieritreritra momba ny mety ho "fomba" hevitra atiny ity; nanome hevitra be dia be ho ahy izy io!
13 Jan 2015 amin'ny 11:24 PM
Tongasoa anao tokoa Joanna! Misaotra nanokana fotoana hanomezana hevitra!